रबि छुटे पछि लाइवमा भाबुक हुँदै के भने ? (भिडियो सहित) – दैनिक नेपाल न्युज
रबि छुटे पछि लाइवमा भाबुक हुँदै के भने ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेसहित तीनै जना रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत चितवनले आज लामिछानेलाई रु पाँच लाख, युवराज कँडेललाई रु तीन लाख र अस्मिता भनिने ‘रुकु कार्की’लाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको हो ।
अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले उक्त निर्णय गरेको अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लामिछाने र कँडेलसँग नगद, जेथा जमानत वा बिना सर्तको बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको छ ।